Dalxiiska Seychelles ayaa Rajo Wanaagsan ka Muujinaya Dhacdadii Jidhkeedii ugu Horreysay ee UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Seychelles » Dalxiiska Seychelles ayaa Rajo Wanaagsan ka Muujinaya Dhacdadii Jidhkeedii ugu Horreysay ee UK
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Wararka Seychelles • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Dib u soo celinta shirarka ganacsiga jirka ka hor inta aan laga saarin liiska cas ee Boqortooyada Midowday, Dalxiiska Seychelles ayaa soo wariyay in wakiilo ka socda Safarka Gossip Roadshow ee saddex magaalo oo UK ah laga bilaabo Sebtember 16 illaa Sebtember 22, 2021, ay rajo wanaagsan ka qabaan safarka iyo macaamiishooda oo aad u daneynaya inay muddo dheer ku dhiiradaan. mar kale qaado.
Tani waxay ahayd dhacdadii jireed ee ugu horreysay ee Boqortooyada Midowday tan iyo bilowgii masiibada bishii Maarso 2020.
Ganacsiga socdaalku wuxuu damcay is-dhexgal fool-ka-fool ah halkaas oo uu ku xiriiri karo oo uu ku dhisi karo xiriirro mar kale.
Gossip Rosshow Roadshow wuxuu isku xiraa xirfadlayaasha ganacsiga iyo wakiilo ka socda adduunka oo dhan.
Meesha loo socdo ayaa lagu matalay Safarka Gossip Roadshow kaas oo ka dhacay Leeds, Brighton, iyo Portsmouth Dalxiiska Seychelles'Fulinta suuqgeynta ee UK, Ms. Eloise Vidot, dhacdadan jireed ee ugu horreysa ee gobolka tan iyo bilowgii masiibada bishii Maarso 2020.
“Ku soo noqoshada waddada ka dib 18 bilood oo shirar la taaban karo ah iyo webinars -ka ayaa noo ah waqti xiiso leh waxaanan aad ugu hamuun qabnaa inaan u soo dhoweyno meel u dhow wakiilada UK. Dalxiisku aad ayuu u badan yahay warshadaha dadka, ganacsiga socdaalku wuxuu damcay is-dhexgal fool-ka-fool ah oo aan ku xiriiri karno oo aan mar kale ku dhisi karno xiriiro, ”ayay tiri Ms. Vidot.
Waxay intaas ku dartay in iyada oo loo marayo dhacdada oo isku xirta xirfadleyda ganacsiga iyo wakiilo ka socda adduunka oo dhan, “waxaan awoodnay inaan kor u qaadno Seychelles oo ah meel xiiso leh, hufan, la isku halleyn karo oo aamin ah oo loo maro wakiilada safka safka hore. Waxaa muhiim ah inaan dib u dhisno kalsoonida safarka iyo meesha aan u soconno. ”
“Ka soo qaybgalka dhacdooyinka, oo dhacay fiidkii, runtii aad bay u fiicnayd; Waxaan la kulmay ugu yaraan 70 wakiil oo tayo leh kuwaas oo ku hawlanaa oo danaynayay inay kor u qaadaan macluumaadka iyo wararkii ugu dambeeyay ee meesha loo socdo. Guud ahaan, waxaan aragnay xiiso weyn oo loo qabo meesha loo socdo, waxay aad u xiisaynayeen inay wax badan bartaan oo ay dib u bilaabaan iibinta, ”ayay tiri Ms. Vidot.
Fiidkii waxay raaceen qaab wareegsan oo robin ah, oo leh fadhiyo gaagaaban oo ay soo -bandhigayaashu u soo bandhigi doonaan alaabtooda koox yar oo wakiilo ah si ay ugu hoggaansamaan xeerarka fogeynta bulshada. Inta u dhaxaysa kalfadhiyada, wakiilada iyo soo-bandhigayaasha waxaa lagu daweeyey casho fadhi-ku-fadhiis ah. Munaasabadan ayaa ku soo dhamaatay abaal marin aad loo wada sugayay.
Iyadoo ka hadlaysa ka -qaybgalka munaasabadda, Marwo Karen Confait, Agaasimaha Dalxiiska Seychelles ee UK & Ireland iyo dalalka Waqooyiga Yurub, ayaa tiri; “Socdaalka Xanta Socodka ee aan ka qaybgalno Boqortooyada Ingiriiska. In kasta oo Seychelles ay weli ku jirtay liistada casaanka ah ee UK ee safarka, waxaan dareennay inay muhiim tahay in meesha loo socdo lagu hor mariyo maskaxda wakiilada. Dareenka guud ee wakiiladu wuxuu ahaa mid yididiilo leh. Macaamiishoodu waxay aad u jecel yihiin inay mar kale safar dheer ku safraan kadib 18 bilood oo ay ahayd inay degaan ahaadaan ama safraan meel aan ka fogayn Yurub. Marka laga saaro Seychelles liiska cas waxaan rajeyneynaa inaan bilowno inaan soo dhaweyno booqdayaasha UK mar kale xeebaheena. ”
Wax ku ool ah 4 am GMT, Isniin, Oktoobar 11, Socotada UK, oo ah Seychelles oo ah suuqa saddexaad ee dalxiiska ugu weyn, ayaa mar kale booqan kara jasiiradda Badweynta Hindiya leh dadka safarka ah ee awood u leh inay helaan caymis meesha ay u socdaan oo tallaalka mar dambe aan looga baahnayn inay qaataan imtixaannada PCR -ga ama lagu karantiilo hoteel la oggolaaday markay ku noqdaan guryahooda.
Destination Mekong lamaanaha cusub ee Glasgow...
Ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo jooga NASA oo ku saabsan Shaqada Cimilada Degdegga ah